Fence Eyewash Mudziyo, Pressure Tank Eyewash Mudziyo - Bohua
Shanghai Hongqiao zvifambiso hub, kambani inoshanda muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwe eyewash. Kubva 2004 kusvika ikozvino, isu takagadzira uye takaburitsa gumi nematanhatu akateedzana uye anopfuura mazana matatu emhando dzeyewash. Yedu yekutengesa vhoriyamu uye tekinoroji zviri munzvimbo inotungamira muChina. Iyo kambani yakateedzana yakapfuudza iyo ISO 9001: 2008 yemhando system chitupa, ISO 14001: 2004 kwezvakatipoteredza manejimendi system chitupa, OHSAS 18001: 2007 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi system chitupa, yakawana chitupa cheChina chemhando yepamusoro zvigadzirwa, ndokuhwina iyo Shanghai kiredhiti kiredhiti giredhi "AAA" bhizinesi.
Iva nechokwadi chehutano hwezvigadzirwa zvedu uye yakanaka kwazvo mushure-yekutengesa sevhisi.
Fence ziso wash ...
65L PURE ZVINOGONESEKA ...
mubatanidzwa showe ...
Ziso rakazara ...
Iyo kambani inogona kugadzirisa marudzi ese easingaenderane eyewash zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Antifreeze Yemeso Washer (Akavigwa)
Antifreeze Ziso Washer (Pedal Rudzi)
Kamuri Yekusuka Maziso
Inotakurika Yeziso Washer
Iyo kambani ine vanopfuura mazana matanhatu emhando yepamusoro vashandi, iyo kambani inokoshesa zvakanyanya kubatana kwechikwata, inoenderana mamiriro
Iyo kambani ine angangoita makore makumi maviri emakore ekuziva mukugadzira uye kutsvagisa nekusimudzira zvigadzirwa zvekuchengetedza vashandi, uye zvigadzirwa zveyewash zvasvika panzvimbo inotungamira mune imwechete indasitiri muChina
Iyo kambani ine vanopfuura makumi mana evakabatana, mazhinji acho ari makuru maChinese nyika uye epasirese zvigadzirwa, senge PetroChina, Sinopec, Coca Cola, Shell Lubricants, Honeywell, nezvimwe.
Kutsvagisa nekusimudzira patent
Iyo kambani inokoshesa kukosha kukuru mukutsvaga nekuvandudza uye kusimudzira zvigadzirwa. Iko kwegore rekudyara mukutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira maakaundi e10% yemari yekutengesa munguva imwecheteyo.
Mureza chigadzirwa kuratidza
Remubatanidzwa nechimbichimbi yokugezera eyewash
Yakakura pedal remubatanidzwa eyewash
Electric kudziyisa remubatanidzwa eyewash
Ichokwadi chaizvo. Yakagadzirwa nesimbi isingaite 304. Dhizaini uye mashandiro akanaka kwazvo. Inoti yemvura inodzorwa neungano. Kusiyana nedzimwe mhuri, inofanirwa kubatanidza pombi mbiri. Izvo zvinyorwa zvakare zvakanaka kwazvo. Kungori kuti diki ruoko kusunda ndiro inofunga nezvechitarisiko uye kunzwa. Zviri nyore uye zvakachengeteka. Yakasarudzika kutarisa. Iyi ndiyo inogutsa kwazvo yandakatenga pandakatenga washer yemaziso
Mushure mekutengesa sevhisi ndiyo yakanyanya kunaka yandati ndamboona pakati pevatengesi vesewash. Chero matambudziko anogona kugadziriswa chero nguva. Vatengesi vakatendeseka, mhando ye eyewash zvakare yakanaka kwazvo
Basa redambudziko rekukurumidza ...
Dzimwe nyaya dzinoda kutariswa ...